HomeWararka CiyaarahaRalf Rangnick oo hoos u dhigay dhacdadii Cristiano Ronaldo intii lagu jiray kulankii Brentford
Tababaraha ku meel gaadhka ah ee Manchester United Ralf Rangnick ayaa sheegay in wax badan laga sameeyay falcelinta Cristiano Ronaldo ee badalka lagu sameeyay kulankii Brentford habeenkii.
Ronaldo ayaa ka soo laabtay dhibaatooyin ka soo gaaray kulankii Bees laakiin waa laga saaray daqiiqadii 71-aad ee ciyaarta, Red Devils ayaa 2-0 ku hogaamineysay kooxda Thomas Frank .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Portugal ayaa sida uu uga xun yahay kursiga keydka ee lagu bedelay, sida uu weydiiyay Rangnick sababta uu u qaatay go’aanka uu kaga saarayo.
Jarmal ayaa ku adkeystay inuu garab taagan yahay bedelka, iyadoo Marcus Rashford , oo bedelay Ronaldo, uu furey ee Man United kulankaan, lakiin waxa uu soo afjaray xulashada soo laabashada ee Brentford.
“Hagaag, waxaan qabaa inaynaan buuq badan ka bixin, kaliya waxaan u hadli karaa naftayda iyo mawaadiinta ujeedada, isaga u muuqday intii lagu jiray ciyaarta, waxaan riyooyin sheeko yar ka dib markii aan dhalinay goolkii hore. Run, waxaan u sheegay si la. mid ah wixii aan ku sheegay shirkeena jaraa’id,” Rangnick ayaa u sheegay kooxda.
“Shaqada macalinka waa inuu kooxda ka caawiya inay guuleysato kulanka, sidaan iska cadeyd waayo aragnimadayada Villa Park in markan ay tahay inaan wax wanaagsan sameyno, si ka wanaagsan ayaan u cayaaro, su’aasha kaliya ayaa ahayd, yaanan. ?
“Dabcan, Cristiano waa gooldhalyaha ugu fiican, waana ciyaaryahan mar walba doonaya inuu ciyaaro oo uu beerta dhaliyo, waxa kale oo i weydiinayay maxaa iiga siibi weyday mid ka mid ah xeerka da’da yar?
“Jawaabtu waxay ka timid shan daqiiqo ka dib markii mid ka mid ah xiddigaha da’da yar uu ku qaaday goolkii wajibaad, laga yaabee in Cristiano uu sidoo kale dhalin karay goolkii fureed, laakiin ciyaarta maahan mid ku saabsan malaha, waa in go’aan. laga heerka saxda ah”.
Ronaldo ayaa dhaliyay 14 jeer sida loo diwaangeliyay 3 caawiyay 22 kulan oo uu u dhashay Man United xilli 2021-22, oo ay ku jiraan sidee gool 17 kulan oo Premier League ah oo uu dhalay.